Rio de Janeiro waa magaalo ku taala dalka Barasiil. Rio de Janeiro Portuguese: [ʁi.u d (ʒi) ʒɐnejɾu];  Wabiga Janaayo), ama Riyadh kaliya,  waa degmada labaad ee ugu badan ee ku nool Brazil iyo kan lixaad ee ugu badan Ameerika. Metropolis waxay ku taallaa agagaarka caasimadda Rio de Janeiro, oo ah magaalo weyn oo ku taalla daafaha magaalada Brazil iyo kan lixaad ee ugu badan Ameerika. Rio de Janeiro waa caasimadda gobolka Rio de Janeiro, oo ah gobolka saddexaad ee ugu caansan Brazil. Qayb ka mid ah magaalada ayaa loo qoondeeyey aduunka oo lagu magacaabo "Rio de Janeiro: Carioca Cimilada u dhaxeysa Buurta iyo Badda", UNESCO 1da Luulyo 2012 sida Cilmi-dhaqameedka 
Markii la aasaasay 1565kii reer Bortuqiis, magaalada ayaa markii hore ahaa kursiga Captain of Rio de Janeiro, oo ah domain ka ah Boqortooyada Portugal. Later, sannadkii 1763, waxa uu noqday caasimadda of State of Brazil, gobolka ah ee Boqortooyada Portugal. 1808, markii Maxkamada boqortooyada boqortooyada boqortooyada Portugal ay ka soo wareegtay Portugal ilaa Brazil, Rio de Janeiro wuxuu noqday kursiga la doortay ee boqoradda Maria I ee Portugal, ka dib 1815, iyadoo hogaamisay wiilkeeda, Prince Regent, iyo King João VI ee mustaqbalka ee Portugal, ayaa kor u qaaday Brazil si sharaf leh boqortooyo, gudaha Boqortooyada Portugal, Brazil, iyo Algarves. Rio waxa uu ku sugnaa caasimadda boqortooyadii Waddanka ku nooshahay ee 1860-kii, markii uu bilaabmay dagaalkii Brazil. Tani waa mid ka mid ah dhacdooyinka yar ee taariikhda ah in caasimadda waddanka gumeysiga si rasmi ah loogu wareejiyo magaalo mid ka mid ah deegaanadeeda. Rio de Janeiro ayaa markii dambe noqotay caasimadda boqortooyadii madaxbannaanayd, Boqortooyada Brazil, ilaa 1889kii, kadibna caasimadda dalka Brazil tan iyo 1960-kii markii caasimadda loo wareejiyay Brasília.
Rio de Janeiro waxay leedahay dalka labaad ee ugu sarreeya ee dowladaha hoose ee dalka,  iyo 30aad ee adduunka ugu ballaaran 2008,  lagu qiyaasay $ 343 bilyan (IBGE, 2008) (ku dhawaad ​​US $ 201 bilyan). Waa xarunta guud ee shirkadaha batroolka, macdanta, iyo shirkadaha isgaarsiinta, oo ay ka mid yihiin laba ka mid ah shirkadaha waaweyn ee shirkadaha-Petrobras iyo Vale iyo Latin America ee ugu weyn shirkadaha Telemedia, Grupo Globo. Guriga Jaamacadaha iyo Machadyo badan, waa xarunta labaad ee ugu weyn ee cilmi-baarista iyo horumarinta ee Brazil, taasoo ka dhigan 17% wax soo saarka sayniska qaranka sida ku cad xogta 2005.  Inkasta oo la dareemayo aragtida sare ee dembiga, magaaladu waxay leedahay dhacdooyin ka hooseeya dembiyada Waqooyi Bari ee Brazil, laakiin waxay aad uga sii badan tahay koonfurta gobolka Brazil, taas oo loo tixgelinayo amaanka ugu fiican dalka.
Rio de Janeiro waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu booqashada badan ee ku yaalla koofurta dhexe, waxaana loo yaqaanaa goobaha dabiiciga ah, carnival, samba, bossa nova, xeebaha balneario  sida Barra da Tijuca, Copacabana, Ipanema, iyo Leblon. Marka lagu daro xeebaha, qaar ka mid ah calaamadaha caanka ah ee ugu caansan waxaa ka mid ah mucjisada weyn ee Masiixa ee Bixiyeyaasha ah ee Korintosta
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Rio_de_Janeiro&oldid=179426"
Last edited on 3 Sebteembar 2018, at 09:56
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 3 Sebteembar 2018, marka ee eheed 09:56.